पूर्व मिस वल्ड प्रिंका चोपडाले गायक पति जोनाससँग कहिले पनि गीत नगाउने बाचा किन गरिन ? « Kalakhabar
पूर्व मिस वल्ड प्रिंका चोपडाले गायक पति जोनाससँग कहिले पनि गीत नगाउने बाचा किन गरिन ?
प्रकाशित मिति : बिहीबार, १२ मंसिर २०७६ ०९:०२
कलाखबर संवाददाता,१२,मंसिर–काठमाण्डौं । पूर्व मिस वल्ड प्रिंका चोपडाले गायक पति जोनाससँग कहिले पनि संयुक्त गीत नगाउने बाचा गरेकी छन् । कारण पति गीतसंगीतले निकै खारिएको र आफूसँग त्यौ क्षेमता नभएको उनले बताएकी छन् । अमेरिकी गायक निक जोनाससँग अभिनेत्री तथा पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपडा विवाह(बन्धनमा बाँधिएको डिसेम्बर १ मा एक वर्ष पुग्दैछ।
मानिसहरूले उनीहरूको जोडीलाई निक्कै ध्यान दिने गरेका छन्। त्यसैकारणले गर्दा उनीहरूको रोमान्टिक तस्विरहरू सामाजिक संजालमा भाइरल भईरहन्छन्। हालै प्रियंकाले निकलाई लिएर एउटा खुलासा गरिन जसको खुलासाले धेरैलाई अचम्म पारेको छ। प्रो म्यूजिक काउन्टडाउनमा उनले निकसँग कहिले पनि युगल गीत नगाउने बताएपछि धेरेलाई असम्ममा पारेको हो।
प्रियंकाले यसको कारण पनि खुलाएकी छन्। म उनको अगाडि गाउने हिम्मत गर्नै सक्दिन। उनी सानैदेखि गीत गाउने, लेख्ने गर्दै आएका छन्। उनी संगीत बनाउँछन। तर मसँग त्यस्तो गर्ने ज्ञान छैन। मलाई गीतसंगीत एकदमै मनपर्छु, उनले भनिन्, तर म उनीसँग कहिले युगल गीत गाउने छैन। म प्रत्येक दिन बिहान उठ्दा पियानोमा मेरा लागि गीत गाइरहेका हुन्छन्। मलाई रेडियो बजाउने आवश्यक्ता नै पर्दैन।